Astropad Studio misafidy ny rafitra famandrihana | Vaovao IPhone
Astropad Studio misafidy ny rafitra famandrihana
Tamin'ny fihaonambe farany natao ho an'ny mpamorona dia nanolotra fomba vaovao hivarotana ny fangatahan'izy ireo ry zalahy avy amin'ny Cupertino: tamin'ny alàlan'ny famandrihana isan-taona, mba hahafahan'izy ireo mankafy hatrany ireo kinova farany amin'ny fampiharana nefa tsy mila mandoa ny volan'ny vaovao indray. , zavatra iray izay nampiasan'ny Tweetbot antsika taloha, saingy tsy izy irery io, satria i Infuse koa dia efa nisafidy ity rafitra famandrihana ity, hahafahantsika mividy ny dika vaovao amin'ny vidiny 12,99 ary hanadino izany na handoa famandrihana 6,99 isan-taona. euro ary hankafizinay ny fanavaozana sy ny kinova vaovao natombok'ilay orinasa. Mazava izany Nofantsihan'i Apple ity hevitra ity ary ny mpikarakara dia mandray izany amin'ny tànana malalaka.
Ilay farany izay nifindra ihany koa tamin'ity rafitra fisoratana anarana ity dia ny rindranasa Astropad Studio, fampiharana izay natao ho an'ny iPad Pro ihany ary ahafahantsika mamerina ny atiny rehetra noforoninay tamin'ny iPad anay tamin'ny efijery Mac. Nefa koa ny Astropad ry zalahy Studio efa nanampy a saika fampidirina am-pitoerana amin'ny Apple Pencil ankoatry ny safidy maro be izay hahafaly ireo mpampiasa izay mampiasa an'ity fampiharana ity amin'ny fomba matihanina.
Asehon'ny Astropad Studio amintsika ny atin'ny fampiharana miaraka amin'ilay sary izay noforoninay, amin'ny alàlan'ny WiFi na amin'ny alàlan'ny tariby USB, misy latency kely. Ity fanavaozana farany ity dia misy fiasa vaovao toy ny Liquid Extreme, mpanitsy loko izay manitsy ny famahana sy ny lokon'ny retina retra ary ny Magic Gestures, andiana fiasa vaovao ahafahantsika mampiasa ny fampiharana miaraka amin'ny rantsan-tànantsika mba hamoronana asa mahavariana. Ny vidin'ny famandrihana isan-taona ao amin'ny Astropad Studio dia 72,99 euro raha 8,49 euro ny famandrihana isam-bolana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Astropad Studio misafidy ny rafitra famandrihana
Ny fampiasam-bolan'i Apple $ 1.000 miliara amin'ny Softbank dia voamarina
Fa maninona raha mividy iPhone amin'ny orinasa ianao dia manana antoka tokana mandritra ny herintaona?